u-Moreeng ubheka uhambo lase-England
Momentum Proteas coach, Hilton Moreeng with players, Lizelle Lee (c) and Marizanne Kapp (R).
Umqeqeshi wama-Momentum Proteas u-Hilton Moreeng useqambe i-tour ye-South Africa yase-England “njengephoxe kakhulu” emuva kokuthi iqembu lakhe lihlulekile ukuthithizisa kwimidlalo eyisikhombisa yezwe abayidlala neqembu lasekhaya ne-New Zealand.
Izivakashi zaqala uhambo ngokuthembisa okukhulu emuva kokuhlula iqembu lase-England ngama-wicket ayisikhombisa kumdlalo wokuqala we-One-Day International ukuba ngaphambili ngo-1-0 kwimidlalo emithathu.
Kube iyona yodwa impumelelo yabo, njengoba beqhubeke bahlulwa kwimidlalo emibili elandelile, futhi ne-series ngo-2-1.
Baphinde badlala kwi-Tri-Series eqophe umlando okwakubalwa ne-New Zealand kuyona. Ama-South Africans akha imiphumela yamarekhodi osukwini lokuqala lomqhudelwano njengoba bahlulwa kuyona yombili imidlalo kwi-double-header.
Babuya kahle ngokunqoba bedlala ne-England kumdlalo olandelile, kodwa kwaba yikhona kodwa ukunqoba njengoba kwalandela ukuhlulwa nama-White Ferns.
“Ngicabanga ukuthi i-tour ephoxile,” kusho u-Moreeng. “Okokuqala ngezinga esinalo eqenjini kanye nendlela esayiqala ngayo i-series.Sakuhlela kahle, abadlali badlala kahle futhi nokuba ngaphambili ngo-1-0 kumdlalo wokuqala kusele embili, kudingeke ukuthi thina sihlezi sifana njengoba sasikhuluma ngakho, esasingenakho njengeqembu. Futhi, kwabonakala kumdlalo wesibili nowesithathu lapho esadlala khona ikhilikithi enhle lapha nalapha. Asikwazanga ukuqeda futhi lokho kwakuzosinqobisa i-series.”
“Ngicabanga ukuthi okwasiphoxa kakhulu njengeqembu kwaba ukuba nesiqiniseko sokuthi siyazibona izikhathi kumdlalo ezibalulekile futhi siqale sidlale kangcono njengeqembu ikakhulukazi sidlala namaqembu afana nalawa, uma ubanika ithuba, bayakwazi ukubuya emdlalweni. Sabanika lelothuba kabili noma kathathu futhi kwagcina kusiphuca i-series. Bekuphoxa kakhulu futhi kuzomele sifunde ngokushesha.”
i-South Africa yanqoba umdlalo wokuqala ngama-wicket ayisikhombisa, bese bahlulwa ngama-runs angu-69 nama-wicket ayisikhombisa kwimidlalo embili elandelile. Kuma-T20s, baphisana ngama-runs angu-216 no-250 osukwini lokuqala, kumdlalo wesibili bahlulwa ngama-runs angu-121.
u-Moreeng kodwa, ebethemba ngamakhono abo kwikhilikithi emfushane.
“Kube isipiliyoni esihle kithina ukudlala kwimidlalo enamandla namaqembu ahamba phambili emhlabeni kwikhilikithi osukwini olulodwa,” eqhubeka. “Emqondweni kulethe inselelo kubadlali kodwa kona kwakukuhle. Kwaku okokuqala kithina ukudlala i-double-header kodwa kwimidlalo, ukuphosa nokuvimba kwakungahambi kahle, njengoba sabona amarekhodi.”
Umqeqeshi wama-Proteas, iqembu lakhe labuya kahle ukuhlula abanqoba i-Tri-Series i-England kumdlalo owodwa abawunqoba kumqhudelwano, uthe kuningi abakufunda emaqenjini amabili.
Unezezele wathi: “Besingayidlalanga ikhilikithi eningi yama-T20 onyakeni odlule ngoba kwakugxilwe kuma-ODIs i-World Cup ikunyaka owodwa, kukhulu esakufunda lapha. Le-tour yasikhombisa ukuthi umhlaba ukuphi nokuthi kudingekani kithina kuyela kwi-World T20. Sahlala phansi osukwini olalandela futhi sakwazi ukubheka okukodwa noma okubili okwakudinga ukuthuthukiswa.”
“Ulwazi manje ukuthi imphumela eku-150-160 ayilungile, kumele uthole ama-runs amaningi, sakubona lokho ngesikhathi sidlala nawo lamaqembu amakhulu,” eqhubeka.
“Manje kuzomele sisheshe sifundele lapho, sizame silungise okungalungile futhi silethe ushintsho kwi-World T20 ezayo. Ngicabanga ukuthi sizobona i-South Africa iqhudelana ngenjwayelo kuhlobo lwekhilikithi obeluhlezi lusilethela inselelo.”
u-Moreeng uzohlasela nokungafani kulandela i-Tri-Series ephoxayo i-South Africa ‘isendaweni enhle’ ngaphambi komdlalo obalulekile we-Tri-Series ne-New Zealand Injabulo njengoba i-South Africa ibheka i-ICC World T20 kulonyaka Nackerdien pleased with Proteas Women’s improved performance against England u-Luus no-Lee bagcina amathemba e-SA kwi-Tri-Series i-South Africa ibheke ukubuyela isimweni emuva kokuyiqala kabi i-tri-series Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series Amakhulu ka-Taylor no-Beaumont asize i-England ilinganise i-series